Iindaba - Abatyali mali Ukuqala kwamehlo kwiCandelo loKhathalelo lwezeMpilo - iTekhnoloji yeLanga
Abatyali mali Ukuqala kwamehlo kwiCandelo loKhathalelo lwezeMpilo - iTekhnoloji yeLanga
IVeki yoShishino lwaMazwe ngaMazwe (Gew) Isikhululo sase-China sango-2020 (nge-14) Sasibanjwe ukusuka nge-13 ukuya kweye-18, ngo-2020. Sasibanjelwe kumazwe angama-170, uGew yenye yezona ziganeko zinempembelelo kakhulu kwicandelo lezorhwebo. Ngo-2020, i-Gew-China iya kuqokelela amashishini amakhulu, amaziko enkonzo yokuqalisa, abatyali mali kunye noosomashishini ukwenza imisebenzi engama-50 + ngeentsuku ezi-6, hlanganisa abatyali-mali abali-1000 + eShanghai, umanyene ne-100 + kushishino oluphambili, ukutsala oosomashishini abali-1000, kunye Ngokudibeneyo Yenza iNkxaso-mali ye-Offline neeNdawo zokuThengisa iMarike eziJolise kwiMizi-mveliso.
Ngenxa yokuchaphazeleka kwesi sifo, iziQalo ezitsha kwiShishini lokhathalelo lwezeMpilo zitsale umdla wabatyali zimali. UGqr Xu Dehui, uMseki weeTekhnoloji zeSunshine, wathi kudliwanondlebe nengxoxo, Imfuno yeeThermopile Infrared Sensors kunye neeModyuli zeSensor ziye zanda ngokukhawuleza ngenxa yoBhubhane. Umndilili weMfuno yeNyanga ngoku iyaLingana naleyo yeenyanga ezintandathu ezidlulileyo. Ngelixa siQinisekisa ngokupheleleyo iMfuno yeNtengiso, Sikwenza ngokuqhubekayo R & d Innovation. Ngo-Agasti, safumana inkxaso kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezenzululwazi Nobuchwephesha Ukuqhubela Phambili Ukuphucula Ukuchaneka Kwenzwa Zemozulu. Kwixesha elizayo, iNkampani yethu iya kuqhubeka nokuTyala imali kwi-r & d Kwaye inegalelo kubaThengi nakuMbutho.
Yasekwa ngo-2016, i-Sunshine Technologies lishishini lesizwe eliphezulu-lobuchwephesha eligxile kuphando lobuchwephesha, uphuhliso lwemveliso, imveliso, ukuthengisa kunye nokubonelela ngenkxaso yezobuchwephesha kunye nesisombululo sesicelo se-MEMS infrared sensors. I-Sunshine Technologies ayisiyiyo kuphela inkampani yokuqala yasekhaya ukuqonda ubuchwephesha be-chip ye-smart thermopile infrared sensors, kodwa kunye nenkampani yokuqala yasekhaya eseke ikhonkco lokuxhasa ukuxhasa imveliso. Izixhobo zayo zokujonga ii-infrared sensors ziye zaphula ngempumelelo ubunini beemveliso zangaphandle. Inzwa yenkampani ephezulu kakhulu yokuchaneka kwe-infrared ineqondo lokulinganisa ngokuchanekileyo kwe-0.05 ℃. (Ukuchaneka komlinganiselo wobushushu kwezonyango kuhlala kufuna kuphela ± 0.2 ℃). Yamkela ilungelo elilodwa lomenzi kunye netekhnoloji yophuhliso, kwaye ubushushu bokubona ubushushu bendawo esingqongileyo bungaphezulu kwamaxesha ali-15 ngaphezulu kuneemveliso ezifanayo zangaphandle (ukuchaneka kwenyuka ukusuka kwi-3% okanye kwi-5% ukuya kwi-0.2%). Ukongeza, ii-infrared sensors ze-Sunshine eziphezulu ze-infrared sensors ziyila uyilo olusebenzayo ngakumbi, ukukhanya kobushushu obushushu bokuguqula imeko yomzimba yenye yeodolo ephezulu kakhulu kunaleyo yeemveliso ezifanayo phesheya. Kwangelo xesha, ii-infrared sensors ze-Sunshine ezichanekileyo ze-infrared sensors ziyimveliso ephuhliswe ngokukodwa, kwaye uphuculo lobuchwephesha olwenziweyo lwenziwe ekupakisheni ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ezingcono.
Ngexesha lobhubhane we-COVID-19 ngo-2020, i-Sunshine Technologies iqinisekise ngokubonelela ngee-infrared sensors for thermometers zebunzi kwilizwe lonke, ngakumbi ukubeka phambili ukubonelelwa kwee-sensors kwiindawo eziphambili zobhubhane eHubei kunye nolwabiwo lwaseburhulumenteni. 2 yezigidi. I-Sunshine ifumene amabhaso kunye nemibulelo evela kwi-Ofisi yoShishino lwezoLwazi kunye neTekhnoloji yoLwazi yeRiphabliki yaBantu base China, kwiKomkhulu lePhondo laseHubei loThintelo noLawulo lweNoveli yeCoronavirus Pneumonia Epidemic, kunye neKhomishini yeTekhnoloji yezoQoqosho nezoLwazi yaseShanghai. Ubuchwephesha beSunshine Technologies 'be-CMOS-MEMS ephezulu ye-infrared infrared sensors sensors zinokudlala indima enkulu kukhuseleko lwezixhobo ngexesha lobhubhane. Ayinakwahluka kwimilinganiselo yokuchaneka okuphezulu, ukuthembeka okuhle kunye nokungaguquguquki kweemveliso zayo, kunye nezi teknoloji zingasentla. Isalathiso ngokuchanekileyo sisona sidingo siphambili sobuchwephesha kunye nenjongo elandelwa ngabenzi boluvo infrared kwishishini. I-Sunshine Technologies ekugqibeleni ifumene ukwamkelwa kubathengi nakwiimarike ngokwazisa kwayo okuqhubekekayo kwetekhnoloji ephambili.
I-Sunshine Technologies izakuthatha uphuhliso lwe "Thermopile Infrared Chinese Core" njengemishini yayo, kwaye izabalazele ukuba ngumnikezeli ophambili wasekhaya kunye nodidi lwehlabathi lwe-MEMS Thermopile Infrared Sensors, kwaye ibe yinkokeli yehlabathi kwi-MEMS ye-infrared infrared sensor industry, ifezekisa. Ubomi obukrelekrele nobungcono ngokujonga infrared.